Elementor: Tifatiraha Wanaagsan ee Naqshadeynta Bogagga iyo Qoraallada WordPress ee Qurxoon | Martech Zone
Elementor: Tifatiraha Wanaagsan ee Naqshadaynta Bogagga iyo Qoraallada WordPress ee Qurxoon
Sabtida, Oktoobar 17, 2020 Arbacada, December 23, 2020 Douglas Karr
Galabtaan, waxaan qaatay dhowr saacadood oo waxaan dhisay macmiilkeygii ugu horreeyay adoo adeegsanaya Elementor. Haddii aad ku jirtid warshadaha WordPress, waxaad u badan tahay inaad horey u maqashay guuxa ku saabsan Elementor, waxay kaliya garaaceen 2 milyan rakibid! Saaxiibkay Andrew, oo shaqeeya Saaxiibada NetGain, ayaa ii sheegay wax ku saabsan kumbuyuutarka oo waxaan horeyba u iibsaday ruqsad aan xad lahayn si aan uga hirgeliyo meel kasta!
WordPress waxay dareemaysay kuleylka ku saabsan awoodeeda edbinta waxashnimada ah. Waxay dhawaan u cusbooneysiiyeen Gutenberg, oo ah tifaftire heer sare ah oo bixiya waxqabadyo dheeri ah… laakiin waa meesha ugu dhow ee lagu beddelayo suuqa. Daacadnimo dhan, waxaan rajeynayaa inay iibsadaan mid ka mid ah waxyaabahan aadka u horumarsan.
Labadii sano ee la soo dhaafay, waan ka faa'iideysanayay Avada dhammaan macaamiishayda. Mawduuca si xarrago leh ayaa loo dhisay, iyadoo la adeegsanayo isku-dar ah labada duluc iyo plugin si loo ilaaliyo awoodaha qaabeynta. Labadaba sifiican ayaa loo taageeraa waxayna leedahay waxyaabo wanaagsan oo horey ubaahan horumarin ama iibsasho.
Qalab way ka duwan tahay maxaa yeelay waa uun qalab kumbuyuutar ah oo si muuqaal la'aan ah ugu shaqeyn kara mawduuc kasta. Boggii aan u dhisay macmiilkan maanta, waxaan kaliya u isticmaalay duluc aasaasi ah oo kooxda Elementor ku talisay, Mawduuca Hello Mawduuca.
Waxaan awooday inaan dhiso goob si buuxda wax uga qabata oo leh liisaska dhejiska leh, gobollada cagaha, bogagga degitaanka ee loo habeeyay, iyo qaabka isdhexgalka… isla sanduuqa. Waxay qaadatay waxoogaa yar oo laqabsashada madaxda Elementor, laakiin markii aan fahmay jawiga, awooda qaybta, iyo walxaha, waxaan awooday inaan jiido oo aan dhigo goobta oo dhan daqiiqado gudahood. Waxay ii keydisay maalmo waqti ah mana aanan aheyn inaan saxo hal xariiq oo koodh ama CSS ah!
Xeerarka iyo Naqshadeynta Daabacaadda Soo-saarista WordPress
Had iyo jeer maahan qalab la socda awoodaha cajiibka ah, laakiin Elementor, waxaad dejin kartaa shuruudo, kiciyayaal, iyo xeerar horumarsan oo ku saabsan sida aad u rabto popups inay u daabacaan… dhammaantood qaab fudud:
Naqshadeeyaha waa mid aad u cajaa'ib leh, waxayna xitaa ku siiyaan tusaalooyin ka baxsan shelf si aad u qaabeyso!
Marka lagu daro Waxqabadka popup, Noocyada Suuqgeynta waxaa ku jira
Xiriirada Waxqabadka - Si fudud ula xiriir dhagaystayaashaada WhatsApp, Waze, Kalandarka Google & barnaamijyo dheeri ah
Qalabka Tirinta - Kordhi dareenka degdegga ah adoo ku daraya waqtiga tirinta tirinta dalabkaaga.
Foom Widget - Nabadgelyo gadaal! Abuur foomamkaaga oo dhan si toos ah, isla markaana laga helo tifaftiraha Elementor.
Bogagga degitaanka -Abuuritaanka iyo maaraynta bogagga soo degitaanka waligeed sidan uma sahlaneyn, dhammaantood waxay ku dhex jiraan boggaaga WordPress ee hadda jira.
Qiimaynta Xidigta Xidigta - Ku dar qaar ka mid ah caddeynta bulshada websaydhkaaga oo ay ku jiraan qiimeynta xiddigga oo u dhig qaabka aad jeceshahay.
Qalabka Carosel Wimget - Kordhi caddeyntaada ganacsi 'caddayn bulsho adoo ku daraya dardaaran markhaati ah oo wareegaya macaamiishaada aadka u taageera.
Maaha wax ku habboon, in kastoo. Waxaan la kulmay xaddidaadyo yar oo ay tahay inaad fahamto:
Noocyada Boosta ee Khaaska ah - In kasta oo aad ku yeelan karto Noocyada Boostada Gaarka ah boggaaga Elementor, uma isticmaali kartid Tifatiraha Elementor qaababka noocyada boostadaas. Mid ka mid ah xallinta tan waa in la isticmaalo qaybaha boostada si loo xakameeyo goobta oo dhan.
Blog Archive - In kasta oo aad ka sameyn kartid bog qurux badan oo bulsheed leh Elementor, ma tilmaami kartid boggaas dejintaada WordPress! Haddii aad sameyso, boggaaga Elementor wuu jabi doonaa. Tani runtii waa arin yaab leh oo igu qaadatay saacado inaan ogaado. Isla markii aan u dhigay bogga baloogyada midna, wax walba si fiican ayey u shaqeeyeen. Taasi waa bummer, inkasta oo sababta oo ah dejinta bogga baloogga waxaa loo adeegsadaa tiro ka mid ah shaqooyinka qaabeynta WordPress. Kama hor istaageyso bartaada sinnaba, waa arin la yaab leh.
Taageerada Lightbox - Muuqaalka soo-baxa waa mid aad u fiican, laakiin awoodda kaliya ee badhanku u furi karo sanduuqa laydhka si aad u aragto sawir-gacmeed ama fiidiyow ma jiro. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira wax cajiib ah Waxyaabaha Muhiimka ah ee Kudarista kaas oo bixiya muuqaalkan iyo sidoo kale daraasiin kale.
Isku-darka waxaa ka mid ah
Haddii aad waligaa barnaamij ka sameysato iskudhafka WordPress, waad ogtahay sida ay u adagtahay. Hagaag, Elementor wuxuu leeyahay isdhexgal horay loo sameeyay oo leh Mailchimp, ActiveCampaign, ConvertKit, Kormeerka Ololaha, Hubspot, Zapier, donReach, Drip, GetResponse, Adobe TypeKit, reCAPTCHA, Facebook SDK, MailerLite, Slack, iyo Discord!
Eeg Dhamaan Astaamaha Elementor
Kordhinta Elementor leh Tilmaamo Dheeraad ah!
Addons Ultimate waa maktabad sii kordheysa oo si dhab ah hal-abuur leh iyo qalab gaar ah oo Elementor ah oo kuu furaya noocyo cusub oo fursado naqshad kuu leh. Xirmooyinkaani cajiibka ah waxaa ka mid ah:
Widgets & Extensions - Maktabad sii kordheysa oo ka kooban 40 + qalabka elektaroonigga ah ee gaarka ah ee qaadanaya awoodaha naqshadeynta illaa heer cusub!
Bogagga shabakadda - In kabadan 100 sheybaarado degel heer sare ah oo aad u habeyn kara oo muuqaal ahaan soo jiidasho leh oo xawaareyn doona socodkaaga shaqada.
Xannibaadaha Qaybta - In ka badan 200 qaybood oo horay loo dhisay ayaa si fudud loo jiiday, loo daadiyay, loona habeeyay, iyadoo boggaaga siineysa naqshad gaar ah dhowr guji.
Haddii aad tahay xirfad-yaqaan naqshadeeye ama mid cusub, waxaad xawaareyn doontaa qulqulkaaga shaqada waxaadna ku guuleysan doontaa nashqado aan caadi ahayn oo fudayd dhammaystiran.
Shaacinta: Waxaan ku faraxsanahay adeegsiga xiriiriyeyaasheeda ku xiran maqaalkan!
Tags: elementorku daristamawduucyada boggaastaamaha 'elementor widgets'plugin wordpress caan ahtifaftiraha wordpressnaqshadeeye bogga wordpresstifaftiraha bogga wordpressplugin WordPress